Iwe unowana sei isingawanzo Pokémon uye upedze yako Pokédex? NaPedyo, Kuona, zizi, nezvimwe!
Usati wabata chero 'mons mukati Pokémon Go, kutanga iwe unofanirwa kuzviwana. Uye izvo zvinogona kuve nyore zvichinzi zvobva zvaitwa, kunyanya kune zvisingawanzo Pok Pokoni senge Snorlax, Dragonite, Lapras, Porygon, Chancey, uye Muk. Izvo zvakanditorera nguva yakareba kuti ndipedze yangu Gen 1 North American Pokédex uye ndiwane vese vanaGen 2 vacheche, asi Pokémon akachinja zvimwe kubva ipapo uye zvinogona kungove nyore izvozvi! Izvo zvinokonzerwa neNzvimbo nyowani, iyo Sightings yakadzoserwa, uye zvishandiso zvishandiso sedendere nestlas ne Facebook mapoka. Isa zvese pamwe chete, uye iwe une mukana wakanaka chaizvo wekuwana zvese zvisingawanzo Pokémon zvaunoda!
Trending: Hatch Gen 2 vana | Evolve Togetic | Gadzirira Gen 2 kuchinja
Inotungamirira: Pokémon Go tips uye tricks | Pokémon Go cheats
Ndekupi iwe kwaunowana mhando dzakasiyana dzePokémon muPokémon Go?
Pakutanga zvaiita senge dzimwe Pokémon dzaingowanikwa mune dzimwe nzvimbo kana nzvimbo - dzinodaidzwa kuti biomes. Kubva Pokémon Go Bhonasi Chiitiko, apo kakawanda uye zvakasiyana misiyamu yakaunzwa, izvo zvanga zvisiri zvechokwadi zvechokwadi zvekare.
Mamwe Pokémon angangodaro akajairika mune dzimwe nzvimbo, uye mvura Pokémon inogona kunge ichinyanyo kuwanikwa pedyo nemvura uye yemagetsi Pokémon mumagetsi biomes, asi muripo chero Pokémon inogona ikozvino kubuda chero kupi.
Ini ndinogara kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweguta rakapetwa guta uye ndakave ne Snorlax spawn panzvimbo gasi chiteshi uye paki, Gyrados uye Lapras padivi pemigwagwa isingataurike-yakawanda, Porygon inomhara pamashopu, uye Tangela as airport. Kana iwe uchigara mukati kana kuenda kuguta rakakura, iwe unowedzera zvakanyanya maitiro ako ekuona Dragonite kana Muk spawn, asi neimwe nzira zvinonyanya kuisa nguva nekuteerera.
Verenga unze kubata kubata zvisingawanzo Pokémon muPokémon Go
Saka, iwe unowana sei isingawanzo Pokémon munharaunda yako?
Pokémon Go ikozvino inosanganisira maviri akasiyana maitiro ekuona iyo Pokémon munzvimbo yako yepedyo. Yekutanga ndeiyi iri padyo, iyo inokuratidza Pokémon yakaturikidzana yakakomberedza PokéStops munharaunda yako. Yechipiri iSightings, iyo inokuratidza iyo Pokémon yakahwanda chero padyo nepedyo, yakagadzirira kubuda.
Iyo Pokémon tab pazasi kurudyi rwekufamba kwako skrini inokuratidza kusvika kune vatatu Pokémon. Tinya pazviri, uye uchaona kusvika pamipfumbamwe. Zvichienderana nezviri munharaunda yako, ivo vanozove vese Vari padyo, Maonero ese, kana musanganiswa wezvose zviri zviviri.
Kunyange padyo kana Kuona hazvikuratidze ose Pokémon yakakukomberedza. Kana paine akawanda PokéStops munzvimbo yako uye yakawanda Pokémon inosunungura pane idzo Stops, Pedyo anongokuratidza imwe chete kana maviri kubva kune imwechete Yakamira. Zvimwechete nekuona.
Zvinorehwa, Pokémon isingawanzo ichasimudzirwa kuitira kuti usavarase. Ruzivo.
Unotevedzera sei uchishandisa 'Pedyo' muPokémon Go?
"Pedyo" ndiyo nyowani, inoteedzera nzira yekutevera muPokémon Go. Iyo inoratidzira kumusoro chero iwe uri kunyange kure nePokéStop uye inokuratidza iyo iyo Pokémon iri akarembera kutenderedza kumira iyo, uchingomirira kubuda. Kana iwe ukaona imwe yaunoda, heino maitiro ekutevera pasi.
Tinya Pokémon Tab nechezasi kurudyi rwe skrini.
Tarisa kumusoro, pasi pemusoro we NEARBY.
Tinya Pokémon iwe yaunoda kutevedzera.
Tora iyo Footprints bhatani kuti utange kutevedzera.
Mepu ichasimudza uye inokuratidza iyo PokéStop panowanikwa Pokémon iyoyo, uye yakaturika mureza weMakumbo pamusoro wayo.
Kana iwe ukarasikirwa netsetse yePokémon, ingoisa panotenderera. Iwe uchaona mureza akarembera pamusoro pePokéStop, kunyange kubva kure. Kana ukakanganwa kuti ndeipi Pokémon yauri kuteedzera, ingo tarisa kune mhete dzinosimudzira dzakatenderedza.
Kusvika riinhi iwe uine kubata kwePokémon iwe uri kutarisisa?
Pokémon inomera ye30 maminetsi. Kana iwe uri kutarisa pane yako skrini kana Pokémon pops kumusoro kwePedyo, ndiyo nguva yakareba sei iwe unofanirwa kuiwana. Kana iyo Pokémon yatove iri padyo nepaunenge uchitanga kutamba, saka unofanirwa kusimuka. Iko hakuna nzira yekuudza kuti kusvika papi mu30 min. uri.
Chii chinoitika kana Pokémon akanyangarika usati iwe wasvika kwairi?
Iko hakuna kana kwakaipisisa kunzwa sekutyaira asi kuti usvike kuPokéStop iyo ine Pokémon iwe urikutevera chete kuti uione iyo de-spawn iwe usati wasvika. Kunyanya kana yaive munzvimbo yakaoma-yeku-kuwana, pakati peusiku, kuchitonhora kunze, kana hongu kune zvese izvo.
Sezvineiwo, pane "nguva yenyasha". Ukaramba uchienda kuPokéStop uye ukasvika ipapo nekukasira, mikana ndiyo Pokémon ichiri kukuomera, kunyangwe ukasazviona paPedyo.
Ehe, tenacity zvine basa.
Nei chiri padyo chichienda chisina chinhu kana uchityaira?
Pokémon Go ine kumhanya kukiya iyo inorova mukati kana iwe uchidarika 35 KM / H. Hazvisi chete zvinokutadzisa iwe kubva pakuputika PokéStops, inodzima padyo neKuona. Izvo zvinoreva kudzivirira vanhu kubva pakutamba Pokémon Go uchityaira, asi zvinosuruvarisa zvinokanganisa vafambi zvakare.
Saka, kana iyo Pokémon iwe yaunenge uchitevera ichinyangarika, usanetseka. Ingoramba uchingoenda kwauri kuenda uye paunoderedza uye kumira, mukati menguva pfupi yenguva Kari pedyo uye Zvirongwa zvinofanirwa kudzoka uye Pokémon inofanira kubuda. (Iyo chaiyo nguva inoenderana nekutsanya kwawanga uchienda uye kwenguva yakareba sei.)
Unomira sei kutevedza muPokémon Go?
Iwe unogona chete kuteedzera imwe Pokémon panguva. Kana iwe ukaedza kutevedzera imwe, iwe unomira kutevera yekutanga. Iwe unogona zvakare nechinangwa kumisa kutevera chero nguva.
Tinya Pokémon iwe yaunoda kumira track.
Tora iyo Footprints bhatani kumira kumira
Hapana kana chakaipa chasara kuteedzera pane kubvira, kana ukabuda pamhando, unongowana meseji uchiti Pokémon yatiza. Asi kana izvo zvichikugumbura, asi imbomira kuenda!
Iwe unowana sei Pokémon uchishandisa Sightings muPokémon Go?
Kana pasina PokéStops mumhando kana iwe uri mukati me200m ye spawn isina kubatanidzwa kune PokéStop, Kuonekwa kuchaoneka. Iyo inowanzo iri pazasi pePedyo, zvakadaro, saka iwe uchafanirwa kuwedzera tabhu kuti uione. Rare Pokémon inofanira kubuda kumusoro zvisinei, asi zvakakodzera kutarisa kana uine nguva chete kuve nechokwadi kuti hautombopotsa iyo Snorlax inomira pakona ...
Dzvanya iyo Tari padyo nechezasi kurudyi rwe skrini.
Tarisa wakananga kuzasi, pasi peSightINGS musoro.
Kusiyana nePedyo, Kuona hakuzokuratidze kuti Pokémon iripi. (Kana iwe ukarikopa, iwe utore runyoro runokuudza iwe kuti 'Tsvaga idzi Pokémon Murondo'.)
Batsira! Kune Pokémon paSightings uye haigone kuwanikwa!
Pokémon muSightings haina kubatanidzwa kune PokéStop nzira iyo Pokémon muPedyo ari. Izvi zvinoreva kuti vanogona Chero kupi zvako mukati me200m, uye izvo zvinoita kuti vawane zvimwe zvezvinetso.
Heano maitiro ekuvhiya pasi:
Kana iyo Pokémon ikatumbuka, iwe waiwana. Bata!
Kana iyo Pokémon yakanyangarika kubva kuSightings, iwe waenda nenzira isiriyo. Tendeuka!
Famba munzira dzakasiyana, uchidzikisa makona kusvikira Pokémon ikatanga.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuita kuti maitiro ave nyore.
Pokémon kazhinji inomera mune imwechete spawn nzvimbo kana neste - makona emigwagwa, nzvimbo dzekupaka, Gyms, piers, docks, nezvimwe - saka zija kune avo vari munzvimbo yako uye musoro mukutungamira kwavo (s) kutanga.
The Silph Road ine tracker yaunogona kushandisa kubatsira kupingudza kana iwe uchizvida.
Mirira, ndedzipi nzvimbo dze spawn uye matendere muPokémon Go?
Spawn point, dzimwe nguva inonzi "matendere" pavanosangana nenzira chaiyo, inzvimbo dzinowanzoita Pokémon. Iyo nzvimbo inosuka (kana dendere) inogona kunge yakakomberedza Pokéstop uye kuoneka muPedyo, kana kutenderera maGyms, pamakona emigwagwa, munzvimbo dzekupaka mota, pedyo nepanowanikwa nzvimbo dzemigwagwa yemvura, nezvimwewo uye kuoneka paSightings.
Chii chinoita kuti chipukanana chisvike pakureba ndechekuti iyo Pokémon imwe chete inowanzoita kuibva ipapo kakawanda pazuva, uye dzimwe nguva mumapoka maviri, matatu, kana anopfuura.
Dzimwe nguva ivo vanofukidza akawanda PokéStops uye spawn nzvimbo. Semuenzaniso, paki yese inogona kunge iri dendere rerudzi rumwe rwePokémon nenzvimbo dzinosvika gumi nemaviri dzinogara dzichiitika.
Pane here rondedzero dzese dzepink nzvimbo uye matendere?
Yup! Iyo Sliph Road inochengeterwa yakakurumbira ruzhinji-yakaomeswa nestlas pamatanda pawebhu.
Kana iwe ukaona kuungana kwevanhu kuve kunze kwemiganhu yekutamba kwakaringana, iwe unogona kuwana mazhinji ezvigaro zvemunharaunda pachako nekungocherekedza chero chekunze-kwe-kwahwo kwakajairika.
Chero masumbu anotsemuka e2 kana anopfuura Pokémon orudzi rumwe chete panguva imwe chete uye anodzokororwa akapararira akafanana Pokémon mumazuva mashoma zviratidzo zvinoratidza kuti wawana dendere. Ingo chengetedza zvinyorwa kana iwe uchida.
Ko maPokémon ari panzvimbo dzakabatikana uye matendere anogara akafanana here?
Izvo zvakafanana kwemavhiki maviri, zvino vanochinja. Kuzivikanwa uye "kutama", shanduko dzinoitika pane mamwe maChina ku12 am GMT. (4 pm PT / 7 pm ET). Saka, nekufamba kwemwedzi mishoma, Charmander dendere rako rinogona kunge riri Slowpoke, Chamander zvakare, Diglett, Drowzee, Paras, uye Growlith, zvichingodaro.
Kufambisa nzou kunoita senge pasina chinhu, saka kana iwe ukawana imwe yaunoda, ibaya kazhinji sezvaunogona mumavhiki maviri iwayo. Zvakare, kana padyo nedendere risingabatsiri, ingomirira mavhiki mashoma uye richachinja.
Unogona kanopfuura wani mhando yePokémon spawn kubva pane imwecheteyo pfungwa?
Mamwe madhiri anongomutsa imwe chete Pokémon mhando, kana imwe inonakidza mhando pamwe nevamwe commons vakaita saPidgey naRattata. Vamwe vanomuka dzakawanda dzinonakidza Pokémon. Semuenzaniso, Staryu, Slowpoke, Polywag, Psyduck, uye Magikarp kazhinji dzinobuda munzvimbo imwechete yemvura-parutivi.
Vese Pokémon vane matendere here?
Zvinosuruvarisa, kwete. Hapana matendere aripo ari kutaurwa eGrimer, Muk, Dratini, Dragonair, Dragonite, Lapras, Snorlax, Porygon, kana imwe Ultra-isingawanzo Pokémon.
Pokémon yakashandurwa inogona kubuda pazasi Pokémon madendere, zvakadaro, kunyangwe zvisingawanzo. Semuenzaniso, Starmie ichave kamwe-mu-mu-zvakanyanya-inomera paStaryu dendere, kana Slowbro padendere reSlowpoke.
Ndapota madhiri, ndapota?!
Dratini inogona kubuda kuMagikarp nestts, kunyange zvisingawanzo. Kunyangwe kana Magikarp ichimera neawa, semuenzaniso, Dratini inogona kungobuda kamwe chete kana kaviri pazuva.
Zvakadaro, kana iwe uine PokéStop kana nzvimbo yekusvipa inowana kazhinji uye yakawanda Magikarp, uye iko kurudyi pamvura, zvisingaiti iwe unowana infrequent Dratini zvakare. Ngarava ndeimwe yenzvimbo dzakanaka kumirira uye tariro yeDrakini.
Zvakadiniko nezve Snorlax, Dragonite, uye Lapras?
Hapana matendere, asi anowanzoonekwa munzvimbo dzakafanana kamwe chete pazuva kana kamwe chete pasvondo. Imwe neimwe ine nharaunda yayo, seLapras iri pedyo nemvura kana Dragonite mumakomo, asi zvakare inomera munzvimbo dzine vanhu vakawanda semaguta. Muguta rangu, vanoita kunge vanoda nhandare yemitambo yeOlympic uye Botanical Gardens kudhorobha.
Nzira yakanaka yekuziva kuti pakasarudzika Pokémon yepamusoro-soro munzvimbo yako ndeyokuita ushamwari nevamwe varairidzi, vobatana nemapoka emunharaunda Pokémon Go Facebook, uye uwane mapoka eIM anorovera munhu wese kana achinge achiona Snorlax ichibuda mupaki.
Ditto - rubatsiro rudiki?
Ditto inogona kushandura kuva imwe Pokémon uye, kusvika ikozvino, ari kungosangana musango mune yake yakashandurwa mamiriro. Izvi zvinoreva kuti hausi kuona Ditto Pedyo kana Kuona, uye haugone kuziva kana akanganiswa padyo newe - uchaona Rattata, Pidgey, Magikarp, kana Zubat isina chiono kana zvinonzwika kiyi kuti ivo chero chinhu kunze kwezvavanoratidzika… kusvikira iwe wavabata.
Izvo chete ndipo iwe paunokwaziswa uine "Ah?" Panzvimbo ye "Gotcha!" Uye iye ozoratidzwa sa Ditto.
Ona kuti ungawana sei uye kubata Ditto mu Pokémon Go
Matendere angamboenda here?
Zvakaoma kutaura. Mamwe PokéStops nemaGyms haaone kuti zvinombo buda zvachose. Dzimwe nguva matendere anongotorwa pamusoro neanoshamisa kwazvo Pokémon kwemavhiki maviri, saCaterpie kana Krabby, uye anogona kuita sekunge aenda.
Chinhu chakanakisa kuita kumirira mavhiki mashoma uye woongorora zvakare.
Zvakadii nezvemepu tracker apps uye mawebhusaiti?
Pokémon Go yakanyatso kupaza pane avo pamusoro pemwedzi yapfuura inotungamira kune vazhinji vavo kungovhara pasi. Kana paine anoshanda tracker app kana webhusaiti yenzvimbo yako, uye haufungi kuti zvinotora zvese zvinonakidza kunze kwemutambo, simba rakawanda kwauri.
Yako yenzvimbo Pokémon Go Facebook boka inzvimbo yakanaka yekuziva nezve chii chinoshanda, chii chisingashande, uye kuti njodzi dzipi dzekushandisa tracker mamepu munzvimbo yako.
Kune chero mashoma Pokémon iwe ausingakwanisi kuwana?
Pokémon Go ichine masecurity exclusives. Kana iwe uchigara kunze kwenzvimbo idzo, haumbofa wakawona idzo Pokémon paSightings kana Pedyo.
Zvikamu zveNorth America: Taurus.
Zvikamu zveEurope: Mr. Mime.
Zvikamu zveAsia: Farfetch'd,
Vacheche veGen 2 pari zvino havatumbuka zvachose uye saka vanogona chete kuwanikwa nekuvabata kubva mazai. Izvi zvinosanganisira:
Pichu (mucheche Pikachu)
Togepi (mucheche Togetic)
Cleffa (mucheche Clefairy)
Igglybuff (mucheche Jigglypuff)
Magby (mucheche Magmar)
Smoochum (mucheche Jinx)
Elekid (mucheche Electobuzz)
Ona maitiro ekuchochidza Pichu, Togepi, uye Gen 2 vacheche muPokémon Go!
Zvakare, uchiri iwe anogona Akashanduka kuti Togepi, mhindumupindu yake haigari ichibva. Saka wedzera kuchinyorwa:
Dzidza maitiro ekuita Togetic muPokémon Go!
Pokémon Go yakakurukurwa: New Solstice Event update features uye Pokémon Go Fest
Pokemon Go matipi uye manomano: Gwara rakazara kune iyo 'Gen 2' yekuvandudza
Pokémon Go Gen 2 Nhungamiro: Chii chaunoda kuziva iye zvino!